Baarlamaanka PL oo go'aan ka gaarey heshiiska DP World | KEYDMEDIA ONLINE
DP World ayaa shaqaalaheeda kala baxday Puntland kadib markii Boosaaso lagu dilay Feb, 2019 madaxdii mashruuca oo u dhashay dalka Malta, waxaana dilkiisa uu keenay inay joogsato shaqada.
GAROWE, Soomaaliya - Baarlamaanka Maamulka Puntland ayaa Maanta oo Sabti ay yeeshay kulan gaar ah oo Xildhibaanada uga doodeen heshiiskii lala galay 2016 Shirkadda P&O port, oo katirsan DP World ee maamusha dekadda Boosaaso.
Fadhiga waxaa goobjoo ahaa 49, kuwaasoo 38 kamid ah ay ogolaadeen in Shirkadda Shaqadeeda sii wadato, waxaa ka aamusay 11 Xildhibaan, mana jirin wax diiday dalabka Deni uu Gollaha Wakiiladda usoo gudbiyay.
P&O Ports ayaa la siiyay qandaraas 30 sano ah, oo ay ku ballaarinayso Dekadda Boosaaso, iyadoo ku maalgelinayso lacag ka badan 330 milyan oo dollar, waxaana heshisikan saxiixay Madaxweynihii hore C/wali Gaas.
Deni ayaa saluugay sida ay ku socoto shaqada, isagoo dhawaan labo jeer booqasho ku tagey Imaaraadka, oo kula kulmay madaxda DP World oo kala hadlay heshiiska, oo uu sheegay inay Puntland ka baxayso hadii aan lagu fulin waqtigii loogu tala-galay.
DP World ayaa shaqaalaheeda kala baxday Puntland kadib markii Boosaaso lagu dilay Feb, 2019 madaxdii mashruuca oo u dhashay dalka Malta, waxaana kadib joogsatay shaqada.